UPetersen uqgugquzelwa ukuncintisana konozinti kwiChiefs
Unozinti osanda kufika kwiKaizer Chiefs uBrandon Petersen, uthi uzizwa ekhethekile ngokugqoka ijezi laMakhosi awathatha njengeqembu elihlonipheke kakhulu.
UPetersen ushiye abalandeli abaningi beChiefs bengawuvali umlomo ngemuva kokushaya into ecekeme bebhekene ne-Orlando Pirates emdlalweni weCarling Black Label Cup.
Ungene esuka ebhentshini wafike wavimba amaphenathi amabili okusize iChiefs yawina indebe. “Uma ungmdlali webhola waseNingizimu Afrika into ekulu kuwe ukudlalela elinye lamaqembu amakhulu.
“Ngesikhathi ngithola ucingo luvela kwimenenja yami ithi iChiefs iyangifuna kwaba yinto emnandi kakhulu. Kwangijabulisa kakhulu ukuthi ngizoba yingxenye yeqembu elikhulu kangaka.
“Ukuza lapha njengonozinti yinto enkulu ngoba uyaziwa umlando wonozinti kuleli qembu. Umndeni wami nabanye engisondelene nabo bayangijabulela kakhulu.
“Kimi kuyinto enkulu ukuba yingxenye yaleli qembu futhi ngikubheke ngabomvu ukudlala kula masizini ezayo,” kusho uPetersen kwabe-website yeChiefs.
IChiefs inomlando omuhle wonozinti abavimba ngisho impukane izidlulela eduze kwabo. Kubo singabala uWilliam Shongwe, Brian Baloyi, Botende Eshele, Gary Bailey, Itumeleng Khune noWade du Plessis.
UPetersen, owake wadlalela iBidvest Wits, uthi ujabule ukuba sendaweni eyodwa nonozinti beChiefs abazimselayo, uKhune, Bruce Bvuma noDaniel Akpeyi. Uyakujabulela futhi ukusebenzisana nomqeqeshi uLee Baxter.
FUNDA NALA: Impethu yokuhluleka kwethu kuma-Olympics ikwezemidlalo ezikoleni
“Ukuba nalabo nozinti nokubabuka besebenza ndawonye, beqguqguzelana, kuyinto enhle kakhulu. Lokhu mina kungivule amehlo futhi kuyangigqugquzela ukuthi ngisebenze ngamandla.
“Sibonile kwiCAF Champions League izinguquko ebezenziwa yiChiefs konozinti, bebefaka othile afike adlale kahle. Lena yinto engenza ngimamatheke,” kusho uPetersen.
Uthe ukuncintisana okukhona kwiChiefs kuzokwenza umehluko omkhulu ekusaseni lakhe njengomdlali webhola. “Kuzoba nesimo sokuthi mina ngiphushe ophambi kwami bese kuba khona ophusha mina, okuyinto ezongisiza kakhulu.
“Ngesikhathi ngiziqeqesha okokuqala neqembu bangenza ngazizwa ngisekhaya,” kuphetha uPetersen. IChiefs izovula isizini entsha ngomdlalo onzima njengoba izobhekana neMamelodi Sundowns kwiMTN 8, ngeSonto ngo-3 ntambama.
Previous Previous post: Kwenzakalani kanti vele ngathi kwezemidlalo, ngabe kushoda kuphi ngampela?
Next Next post: UNomvete ugqoka amakhokho akhombise abagadli ishaywa kanjani inethi